‘Tsunami Malayziana’ Manohitra Ireo Tsi-Fetezan’ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
‘Tsunami Malayziana’ Manohitra Ireo Tsi-Fetezan'ny Fifidianana
Voadika ny 12 Mey 2013 5:06 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, Español, 繁體中文, 简体中文, English
An'aliny ireo olona tao Malaizia no nifamory tao amin'ny kianjaben'i Kelana Jaya izay akaikin'ny renivohi-pirenena tamin'ny 8 mey 2013 hanohitra ny vokatra navoaka farany nandritra ny fifidianana ankapobe faha-13. Nahazo ny 51 isan-jaton'ny vatom-bahoaka ny fiaraha-mientan'ny mpanohitra Pakatan Rakyat saingy toerana 89 ihany no azony raha nahazo toerana 133 kosa ny fiaraha-mientan'ireo efa eo amin'ny fitantanana Barisan Nasional (BN).
Noho ny fandreseny, ny BN amin'izao fotoana izao no ‘mandatehezana voafidim-bahoaka ela nitondrana indrindra manerantany’ izay tonga teo amin'ny fitondrana hatramin'ny taompolon'ny 1950. Saingy, nizaka ny faharesena ratsy indrindra izy hatramin'ny 1969.
Ny tati-baovao no manombana fa tokotokony ho anelanelan'ny 50.000 ka hatramin'ny 60.000 eo ho eo ny tongoron'olona tao anatin'ny kianjaben'i Kelana Jaya. Saingy nitatitra ny Malaysiakini fa mihoatra ny 120.000 ny olona nitanjozotra ho any amin'ilay hetsi-panoherana, raha isaina ihany koa ireo olona tsy tafiditra tao amin'ny kianjabe:
Raha ampidirina ireo tratran'ny fitohanan'ny fifamoivoizana nanodidina ny Petaling Jaya, dia tombanana ho 120.000 ny isan'ireo olona nitangorona – mametraka azy ho anisan'ny fihetsiektsehana be olona indrindra tao ho ao
Na teo aza ny erikerika, mbola nikoriana [nitanjozotra] nankany amin'ny kianajbe hatrany ny olona. Natoby hatrany amin'ny 2km manodidina ny fiara ary tahaka ny tsy hifarana izany mihitsy ny fotoana ho an'ireo mpanohana tonga.
Olona an'aliny tafavory tao Malaizia hanohitra ny voka-pifidianana ankapobeny. Saripikan'i Ramon Fadli, Copyright @Demotix (5/8/2013)
Izao no hitan'i Genevieve Nunis tao amin'ny hetsika:
Hipok'ireo Malaiziana tsy manaiky ny voka-pifidianana ankapobeny faha-13 ny kianjabe, ary nataon'izy ireo izay hahafantaran'ny mpitarika izany tamin'ny alalan'ny fiantsoantsoana hoe ‘Reformasi’ (fihavaozana) sy ‘Ubah’ (fiovana). Nifamory hisian'ny fifidianana malalaka sy ara-drariny ireo tangoron'olona izay miakanjo mainty avokoa
Tena fitiavan-tanindrazana tokoa izao. Misy tokoa ny Malaiziana tia ny fireneny ary maniry hoavy mamirapiratra ao Malaizia. Mety ho fanatsapana mahahenika ny rehetra ve izany? mety ho izay, saingy ny zavatra mahafinaritra dia manadino ny tsy fitovia-keviny ny rehetra, ka miara-mitolona ho an'ny fireneny tahaka ny olona iray.
Mpanao fihetsiketsehana iray mitazona sarontava “anonymous” nandritra ny fihaonamben'ny mpanohitra. Saripikan'i Hafzi Mohamed, Copyright @Demotix (5/8/2013)
Ny marika fifankafantarana Twitter #black505 sy #kelanajaya no nampiasaina hanangona-kevitra sy sy ifampizarana vaovao farany momba ny fihetsiketsehana. Indreto ny sioka nisongadina sasantsasany:
@JustinTWJ mety hoe tsy any amin'ny kianjan'i Kelana Jaya ny vatako fa ny foko sy ny saiko kosa any. #black505
@AD___AM Jereo ireo olona diso toerana sy tsy mahay mankasitraka tonga tao Kelana Jaya omaly.
@critic4good Nifarana ny #black505, saingy mbola hihamatanjaka hatrany ny fahavononana hiady ho amin'i Malaizia tsara kokoa. Mahery ianareo ry zalahy!
@sueannajoe mahita ny olona avy amin'ny foko rehetra miakanjo mainty miray hina aho. Mahita fivondronana, mahita fanantenana, mahita fitiavana ho an'ny firenena aho. #black505
@Supernoves dia heni-pifaliana sy afa-mirehareha tamin'ny fizotran'ny zava-nitranga tao #kelanajaya halina teo. Tsy azo ampanginina intsony ny feonay. Izany no tokony ho izy
Nampitandrina ny governemanta fa mety hampangaina ho manao fiokoana ny nandray fitenenana sasantsasany. Nanambara ny mpanohitra fa mbola hisy ny famoriam-bahoaka hafa.
ireto lahatsary nampiakarina tao amin'ny YouTube ireto mampiseho ireo olona tafavory tao amin'ny kianjabe:
Nanonona ny herim-bahoaka tany Philippines tamin'ny 1986 i Terence Netto raha nidina an-dalambe ny Filipinos ka nioko ny miaramila ho fanoherana ny hala-bato nataon'ny fitondrana:
Antenaina fa tsy ilaina ny fidirana an-tsehatr'ireo mpanao fanamiana hanampy tosika ny andaniny na ny ankilany eto amin'ity fifampiahiahiana avy amin'ny voka-pifidianana ankapobeny faha-13 ity.
Tondroin'ny Praiminisitra Najib Razak ho avy amin'ny fanohanan'ny mpifidy Shinoa ny fiakaran'ny vato azon'ny mpanohitra. Nantsoiny ho “Tsunami shinoa” moa izany. nitsikera an'i Najib ny mpanoratra taratasy iray milaza ny tenany ho Olo-Pirenena Diso Fanantenana:
Nilaza ny heviny momba ny safidim-baton'ny vondro-piarahamonina shinoa, izay namaky ny foko, ny praiminisitsika… Mahatsapa aho fa toy ny olona tsy mandeha rà ny nataony.
Ary ankehitriny mety hampidi-doza ho an'ny firenena ny fanondroana vondron'olona ho “tsunami” satria hoe nifidy ny mpanohitra izy ireo ary heveriko ho fahakelezan-tsaina sy tsy fahamatorana eo amin'ny teti-panorona.
Saingy marina ve ny fomba fanadihadian'i Najib? Misisika ny mpampianatra oniversite fa ny fahaverezam-baton'ny mpitondra dia avy amin'ny nifidianan'ny ankamaroan'ny tambonivohitra ny mpanohitra. Lazain'ny sasany ho ‘tsunami tambonivohitra’‘’ na ‘tsunami Malay’ izany.
Mandahatra ny lisitry ny fanavaozan-drafitra ilaina ho raisina andraikitra i Gertrude Pereira :
Raha tena hiditra amin'ny fampihavanana sy ny fifamelana, dia aoka hisoka-tsaina. Diovy ny lisitry ny mpifidy, havaozy ny fahafaha-mifidin'ireo ivelan'ny tanindrazana, avelao halalaka sy ho ara-drariny ny fahazoana miditra amin'ny media, tondroy mazava tsara fa eny amin'ny ambaratongan'ny kianja filalaovana no hanaovana ny fifidianana manaraka ary ataovy alohaloha kokoa fa tsy taratara ny fifidianana ankapobe faha-14. Ary tandrovy izany hadio.
Mandresy lahatra i Ramesh Rajaratnam fa ny fomba fifidianana no efa lany daty (hafahafa):
Raha tsy misy ny fiaraha-miezaka ataon'ny depiotentsika hisian'ny rariny kokoa eto amin'ny firenentsika amin'ny alalan'ny fikirizana hisian'ny fisoloambava tsy miangatra ao amin'ny Antenimiera, dia tena ho sarotra dia sarotra ho an'i Najib ny mangataka fifampihavanana raha efa lany daty tanteraka ny fototra ifaharan'ny teniny.
Raha tsy fantatrao izay vaky, ahoana no ahaizanao mametaka manambatra azy?
Dr. Syed Muhd Khairudin Aljunied manambara ny fisandratan'ny taranaka vaovaon’ny mpifidy Malay:
Efa nametraka ny fetra faran'ny politikan'ny vola ny GE13 ary naharihariny fa efa voaisa ny sisa andron'ny sekoly antitry ny politikam-poko. Efa mitodika any amin'ireo mpitarika manana fijery misokatra amin'ny fifampikasokasohan'ny foko sy volonkoditra samihafa, tsy ijerena ny antoko politika niaviany, mpitarika mametraka ny tombontsoan'ny Malay, ary ambonin'izany rehetra izany ny tombontsoan'ny Malaiziana rehetra ao am-pony ireo taranaka Malay vaovao.
Manohitra ny fanapaha-kevitry ny mpanohitra hanao fihetsiketseha-panoherana i Just Read! :
Na nisy hafahafa (lany andro) na tsia ny fifidianana ankapobe faha-13 vao vita teo, efa fiaingana tsara ho amin'ny fifidianana ‘madio sy malalaka’ eto amin'ny firenena iny; ary amin'ny fanajana an'i Datuk Seri Anwar Ibrahim, miangavy mba ekeo ny fanapaha-kevitry ny mpifidy!
Aoka mba tena ho lehilahy mana-kaja, manaova ho mpitarika tsaran'ny mpanohitra ary ento tsara hanao ny asa maha-mpanohitra sady mpanorina azy ny ekipanao fa tsy hifanivaiva amin'ny ankilany sy hifanditra ara-politika amin'ny governemanta nampidirina.
Mieritreritra toy izany ihany koa momba ny mpitarika ny mpanohitra i tunku :
Mety ho tsy mahay mandresy izy amin'ny fifidianana, saingy hain'i Datuk Seri Anwar Ibrahim tsara ny manentana ny mpanohana azy sy mandresy lahatra an'izao tontolo izao fa lasibatry ny tsy rariny izy
Amin'ny alalan'ny teny fifankafantarana #mywant, ny Malaiziana sasany no miantso firaisampirenena sy firindrana :
#tiako ho an'ny Malaiziana mampitsahatra ny fitakiana fifidianana indray. Tena marindanja tsara ka atreho. Andao hanangana Malaizia tsara kokoa
Soratra miverina: ‘Fa Inona Koa No Tadiavin’ny Shinoa?’ Lohateny Mahatezitra ny Malaiziana · Global Voices teny Malagasy
[…] fanambarana ny voka-pifidianana[mg] ankapobe faha-13 tany Malaizia, Dia nisokitra ny voambolana ‘tsunami Shinoa’ ny […]
18 Mey 2013, 22:42